Toa lelon-jaza koa. | mandimby maharo
Toa lelon-jaza koa.	Posted on 17 April 201217 April 2012 by Mandimby Maharo	Hay ve ka mifindra koa ny maha-foza orana e? lasa nahazo ilay fomba ratsy mihemotra koa ireto milaza azy ho mpanohitra ny mpanongam-panjakana sy mpanaraka ny ara_dalàna. Tsy iza izany fa ireto olom-boatendri(n’iza ?) avy amin’ny ankolafy Ravalomanana.
« Toa atao haingom-bato azahoana fankatoavana fotsiny ny fidiranay tao… ka handray ny andraikitray izahay… ». « Ny fivoahanay ny trano fivoriana tsy midika ho fialanay tao amin’io andrim-pitondrana io fa tsy te ho mpiray tsikombakomba amin’ny tsy fetezana izahay… ». « Lany iny volavolan-dalana momba ny famelan-keloka iny, fa manahy aho fa sao dia tsy mitondra any amin’ny fitoniana akory izany satria nisy ny tsy nanaiky… » hoyizy ireo. Kabary izao, fandangolangoana izao, teny tsara lahatra entina ilazana tsotra hoe tsy te hiala amin’ity seza natolotra maimaim-poana ity izahay ka manao izay mba ampaharitra ny tetezamita. Rehefa dinihana tokoa ny zava-misy dia toa ireto nantenain-kanirina indray no toa nampivandravandra. Ny antony nidiran’izy ireo tao mantsy dia ny hampodiana ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny amoahana ny gadra politika, ny anokafana ny haino aman’jery nakatona ary ny hikarakarana fifidianana hiverenana any amin’ny fenitra manara-dalana. Inona nefa no teo? Nandany ny lalàna momba ny antoko politika, nifidy ny lalàna momba ny fanaovana politika (ethique et code de bonne conduit des politiciens de la transition), nandany amin’ilay endriny tsy mampilamina ny lalana famelan-keloka no vokatra natolotra. Toa adino tanteraka iretsy hevitra nodradradradraina nadritry ny 3 taona.
Tsy mahagaga koa nefa raha izao no zava-misy satria na dia mpikambana ao amin’ny adrimpanjakana ary izy ireo dia angady tsy mahatapaka ahitra. Voalohany aloha dia ny ankamaroany dia olona nontsiponina : namanamana, havana, sakaiza mpiara-“mitolona” amin’ireo lohandohan’ny mpisorona ny ankamaroany. Olona izay inoana marimarina tokoa fa tsy manana fahaizana amin’ny fanaovana politika fa mpanara-drenirano toa … fotsiny. Ka zarany ary nahazo seza, karamaina vola be, rakofana fahefana ka afaka mba manao izay mba mampitombo harena tampotampoka. Ireo izay mba tena olona manana ny maha izy azy indray dia ny kajy politikany no be fa tsy ny fanavotam-pirenena. Maro amin’izy ireo manko no efa olom-boafidy tamin’izany fotoana izany no lasa ao. (Iarahana mahalala ihany koa ny fomba nahalany azy ireny tamin’izany: mode de scrutiny natao hahazoany tomony, fampisamahana ny farim-pifidianana isan-kazany, ny fanaovana pseudo-independent …°. Niverina amin’ny taniny ny jiosy ka tsy azo atao n’inona na inona. Efa lasa ny azy ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana depiote na ben’ny tanàna manaraka. Ao ihany ilay fanahiana fa mety tsy ho lany intsony satria tratra ny tena fahaizana amin’izay famahana krizy izao.
Ny faharoa dia ny fiandrasana baiko avy atsy Afrika Atsimo. Nisy ihany ny teny nolazain’ilay lehiben’izy ireo hoe “ anjaran’izy ireo any Madagasikara no manadray fanampahan-kevitra fa izy ireo no tena mahalala ny zava-misy any” taorian’ilay tsy namelana azy hody iny. Ny eto Madagasikara indray dia milaza isaky ny anonraniana fa “fanampaha-kevitry ny Filoha Ravalomanana no tsy hialanay ao”. Dia iza izany no tena mpandray fanampahan-kevitra? Dia mbola tsy mahay mandray lesona ihany ve mandraka ankehitriny fa mbola manao didiko fehy lehibe nefa dia efa izany no nampiala teo amin’io fitondrana io? Dia mbola tsy mahay mifampiteny ihany ve fa mbola manao “oui mesé-oui mesé “ foana hatramin’izao?
Mandritra izany rehetra izany dia miandry ny olona. Miandry ny fandraisana fanam-pahakevitra avy any amin’ny mpanelanelana hono satria efa nandefa fitarainana any ireto mpiaro ny tombotsoa ambonin’ny firenena ireto. Ka raha ny fanapahan-kevitr’izy ireo no tena itondrana ny firenentsika koa inona moa izany nop ilana azy ireo eo amin’ireo seza ireo. Mandany vola sy mankarenin-tsofina fotsiny ny kabarin’izy ireo. Nefa tadidio fa io olonamiandry io dia mandinika ka handray ny fanampaha-kevitra ihany koa rehefa tonga ny andro…
Tags: marc ravalomananaCategories: Uncategorized